Wallström: Halis ayaa muuqata haddaan xal loo helin isqabsiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wallström: Halis ayaa muuqata haddaan xal loo helin isqabsiga
Dawladaha caalamku waa u diyaar
La daabacay torsdag 20 november 2014 kl 16.31
Wasiiradda arrimmaha dibadda ee dalkan Iswiidhen Margot Wallström ayaa ka qayb gashay kulan magaalada Kopenhegan uga furmey waddammo ka kooban 56 oo badankood xubnihii matalayey waddammadaasi ahaayeen wasiirradoodii arrimmaha dibadda, kulankaasina oo looga xaajoonayey arrimmaha Soomaaliya. Dhanka kale waxaa kulanka goob joog ka ahaa madax-waynaha dawladda federaalka Soomaaliya, Xasan Shiikh Maxamuud. Margot Wallström oo khadka telefoonka ugu warrameeysay idaacadda Radio Sweden ayaa sheegtay in dalkani uu dardar-gelin doono wax qabadka Afrika iyada oo loo marayo howlahaa ururka caalamiga ee Qarammada Midoobey:
- Waxaan dardar-gelin doonaa howlaha aan ka wadno ururka caalamiga ee Qarammada Midoobey, waxaan sidoo kale xoogga saari doonnaa sidii aan gacan dheeri ah uga geey-san lahayn hoowlaha taakuleeynta waddammada dhaca Qaaradda Afrika. Sida aad la socotaanna waxaannu dhowaantan gaarney go’aankii ictiraafka Falastiin. Inaan ku dhiiranno inaannu muujinno geesinimo oo aannu qabanno kaalin hogaamin ah su’aalaha qaarkood.
Siyaasaddaa ayaan meshaa ka sii wadi doonnaa.
- Waxaan iminka go’aansanney inaan qayb ka ahaanno qorshaha atlanta ee burcad badeedda lagula dagaalameyo. Iyo sidoo kale mooshinno kale.
Kulan heer wasiireed oo ey ka soo qayb galeen xubno ka socdey 56 waddan oo badankood ahaayeen wasiirrada arrimmaha dibadda oo ka dhacaya magaalada Kopenheegan ee dalka Danmarka 19-20-ka bishan noveembar ayaa looga xaajooneyaa xiriirka is-kaashi ee waddammada caalamka oo garab ah iyo dawladda Federaalka Soomaaliye iyo xubnaha kala duwan ee dawlad goboleedyada oo dhanka kale ah. Kulankaasina oo ah midkiisii ugu horeeyey ee sannadlaha oo lagu lafo gureyo heerka uu marayo wax-qabadka howlaha dawladda Federaalka iyo sidii dawladaha caalamku ugu fidin lahaayeen taageero. Kulankaasina oo ka dhacaya magaalada Kopenheegan ayey si wada-jir ah u hoggaamineyaan madax-waynaha dawladda Federaalka Xasan Shiikh Maxamuud iyo dawladda martida loo yahay ee Denmark.
Iswiidhen oo ka mid ah waddammada ugu firfircoon ee deeqda bixiya ayay kulanka u mataleeysaa wasiiradda arrimmaha dibadda Margot Walström. Wallström oo khadka tlefoonka ugu warrantay Radio Sweden ayaa sheegtay inay ku farax-san tahay inaan Soomaaliya beryahan dambe laga maqal warar dhiilo ah, middaasina muujineeyso in dalkaasi ku taagan yahay dhabbadii xal waara lagu gaari lahaa:
- Aad ayaan ugu qanac-sannahey inaan Soomaaliya beryahan dambe laga maqal warar dhiilo ah, waana mid summad wanaag-san u noqoneeysa muujinta in lagu mashquul-san yahay sidii xal waara loo gaari lahaa, sida ay sheegtay.
Hase yeeshee ay wasiirraddu sidoo kale sheegtay in uu kulanka ka jirey welwel ballaaran oo laga qabo xaaladda siyaasadda cakiran ee u dhexeeysa hoggaanka dalka, waa madax-waynaha Xasan Shiikh Maxamuud iyo madaxa dawladda Cabdiweli Shiikh Axmed Maxamed:
- Aniga qudheeydu waxaan kulan laba geesood ah la yeeshay madax-waynaha dawladda Federaalka Soomaaliya, caalamkuna wuu wada ogsoon yahay xaaladda cakiran, waana mid aannu ka wada-hadalney sidii gacan looga geey-san lahaa in deggenaan lagu soo celiyo.
Dhammaadkii bishii septeembar ayay ahayd kolkii uu si ballaaran u soo shaac baxay khilaaf mugdi geliyey howlihii maamulka dawladda Federaalka ee u dhexeeya madaxda ugu sarreeysa ee dawladda, midkaasina oo aan illaa iminka xal loo helin. Waana mid ka mid ah waxyaabaha hareeyey kulanka magaalada Kopenheegan uga socda dawladdaha caalamka ee xiiseeya iyo Soomaaliy, hase yeeshee ey ajendeyaashii kulanku lagu soo qaatey ey ka ballaarnaayeen, sida ay sheegtay Margot Walsström, wasiiradda arrimmaha dibadda ee dalka Iswiidhen.
Dhabbo looga gudbi karo miyaa furan?
- Waxaa halkan isku jira arrimmo fara bada. Waxaa laga hadleyaa hoggaan wanaag in la helo. Siduu hoggaanku u ekaan lahaa, yaa hoggaanka qaban doona, sida loo qaybsaneyo hoggaanka. Waxaa laga hadleyaa in meel dhexe la isugu yimaado, sidii howlahaa loo fulin lahaa.
- Waxaan qabaa inay tahay loolan adag in la helo maamul federaal ah oo aan aqoon wanaag-san iyo waayo-arag-nimo loo laheyn, isla-markaana u baahan dhaqaale fara badan illaa laga dhiso kaabeyaashii dhaqaale. Waxaa loo baahan yahay maal-gashi sidii tusaale ahaan lagu dhisi lahaa waddooyin, lagu abuuri lahaa goobo shaqo.
Mustaqbal wanaag-san ayaa jira ayay wasiirraduu hadalkeedii ku soo gabagabeeysay, hase yeeshee waxaa dhanka kale jira welwel laga cabsi qabo inuu dalka soo wajaho, waa haddii aan la helin xal siyaasadeed ee waara:
- Waddammada badankood waxey farta ku fiiqeen cabsida ah in dib loogu noqdo caqabadihii ey soomaaliya ka soo gudubtay, iyagoona ka faalloodey sidii wax looga qaban lahaa su’aalo ey ka mid yihiin ammaanka, sida awoodda loo maamulo, sida dhaqaalaha loogu isticmaalo hab ku wanaag-san, in taageero laga geeysto kolka ay baahiyi timaaddo. Waa mid la ogsoon yahay in is-qabsigu haddii uu halkaa ka sii socdo uu dhalin karo carqalad.